यस्ता व्यक्तिहरुमा आउँछ धेरै निराशवादी सोच ! - Naya Pusta
यस्ता व्यक्तिहरुमा आउँछ धेरै निराशवादी सोच !
✍️ नयाँ पुस्ता	 २०७५ फाल्गुन ३० १७:५५ 3
चितवन । भनिन्छ सकारात्मक सोचले मानिसको आधा भन्दा बढी रोगहरु निको हुन्छ । जब मानिसको मनस्थितीमा नकारात्मक सोच आउन थाल्छ तब मानिस एक्लिन थाल्छ र केही न केही नकारात्मक काम गर्न थाल्छ।
हाल सम्म भएका विभिन्न घटनाहरु पनि मानिसको दिमाखमा खेल्ने नकारात्मक कुराको प्रतिफल हो । जब मानिसले साचेको कुरा भन्दा माहोल परिवर्तन भईदिन्छ , त्यस पछि मानिस निराशावादी हुन्छ र त्यही निराशावादी पछि गएर नकारात्मक सोचको विकास हुन्छ।
यस्ता व्यक्तिहरुमा आउछन् धेरै निराशवादी सोच
– कहिले काहीँ जागिरमा सोचेको जस्तो पद्धोन्ती हुन नसक्दा पनि व्यक्ति निराशावादीको सिकार हुन सक्छ ।
कतिपय व्यक्ति सधैँजसो निराश देखिन्छन् । काममा उत्साहित नहुने, जतिवेला पनि मनमा पीडा भएको अनुभव गर्छन् । कसैप्रति चासो नदिने, एकोहोरो सोचिरहने, सानो कुरामा मन दुखाउने, सानो कुरामा धेरै खुसी देखिने लक्षण देखाउँछन् । निराशापन एक प्रकारको मानसिक रोग हो ।
– धेरै निराश हुने, रमाइलो महसुस गर्न नसक्ने, सम्झन नसक्ने, थकानको महसुस हुने, आत्मविश्वासमा कमी आउने, सधैँ नरमाइलो लाग्ने, काम गर्न मन नलाग्ने, दिक्क लाग्ने, निद्रा गडबड हुने, खाना खान मन नलाग्ने, कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने इच्छाशक्तिमा कमी, हरेस खाने, केही गर्न सक्दिनँ भन्ने सोच आउने व्यक्तिमा आत्महत्याको सोच आउँछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : १६ भन्दा बढी रोगका लागि अचुक औषधि घ्यू कुमारी, यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
– मनमा नकारात्मक कुरा आउँछ भने सकेसम्म मनलाई अन्यत्रतिर लैजानुपर्छ । नकारात्मक सोच्नु हुँदैन । के कारण मनमा नकारात्मक सोच आएको हो, पत्ता लगाउनुपर्छ ।
घरमै बसीबसी यसरी बनाउनुस् चम्किलो अनुहार !
इलामको माइपोखरीमा आगलागी, ४ घर जलेर नष्ट